ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးဆိုင်ရာအရေးပါမှုနှင့်ကြီးပြင်းလာသည့်လူကြီးဘဝတွင်အလိုအလျောက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့အကြား longitudinal links (2017) - Your Brain On Porn
ထွန်းသစ်စလူကြီး (2017) စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, အိမ်ထောင်ရေးအရေးပါမှုနှင့်အလိုလိုလိင်အကြား longitudinal လင့်များ
Leonhardt, Nathan D. နှင့် Brian J. Willoughby ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၊ အိမ်ထောင်ရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးမှုနှင့်အရွယ်ရောက်လာသောအခါခွင့်ပြုနိုင်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့အကြားတွင်ရှည်လျားသောဆက်စပ်မှုများရှိသည်။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2017) Just-လက်ခံခဲ့သည်။
နာသန်ဃ Leonhardt & ဘရိုင်ယန်ဂျေ Willoughby
အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 14 သြဂုတ် 2017
ကန့်သတ်သုတေသနညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြောင်းကိုထွန်းသစ်စလူကြီးများ '' ယုံကြည်ချက်ခန့်မှန်းဘယ်လိုဆန်းစစ်မျှသုတေသနနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏ဆကျဆံရေးဘယ်နေရာတွေမှာထွန်းသစ်ပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုရည်မှတ်ရှိနေပါသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကို cross-section 568 ထွန်းသစ်စလူကြီးများ၏ရလဒ်များကိုနှင့်မူရင်းနမူနာအနေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ကြသူအ 142 သင်တန်းသားများ၏ longitudinal ရလဒ်များကိုပါဝင်သည်။ Regression ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု Cross-Section လက်ထပ်နှင့်ပိုပြီးအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေရတဲ့မတိုင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစေတနာအပေါ်ထားရှိမြင့်မားအရေးပါမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိလေ့လာဆန်းစစ်။ longitudinal ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအနိမ့်အိမ်ထောင်ရေးကအဓိကဗဟိုနှင့်ပိုပြီးအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေခန့်မှန်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသာထွန်းသစ်စလူကြီးများ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြု, ဒါပေမယ့်လည်းကျယ်ပြန့်ဆက်ဆံရေးမျိုး script များလွှမ်းမိုးနိုင်ပါသည်။
အခြေခံအသင်းအဖွဲ့များညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အားလုံးမှီခို variable တွေကိုအကြားသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ထင်ရှားသော်လည်း, ထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုအပါအဝင်ပြီးနောက်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသငျ့စံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုလိုကျနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်, ကျားမ, လူမျိုး, ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်မိဘများ၏အိမ်ထောင်ရေး status ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကွဲပြားခြားနားသောမှီခို variable တွေကိုနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ပုံအားလုံးကိုသိသာထိန်းချုပ်မှုခဲ့ကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်သင့်စကေး၏အရေးပါမှုကိုမှတဆင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းသို့သော်ပင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ, အသင်းအဖွဲ့, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေတွင်၏ဧရိယာ၌တိကျသောယုံကြည်ချက်ကနေတဆင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့စပ်လျဉ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များအပါအဝင်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များအကြားကျန်ရစ်၏။
ယခုအသစ်တွေ့ရှိချက်ကပိုမကြာခဏညစ်ညမ်းရှုမြင်သူကိုထွန်းသစ်စလူကြီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစေတနာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတုဗေဒညစ်ညမ်းရှုမြင်ကြဘူးသောသူတို့ထက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအသငျ့အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်သောသူဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစေတနာနှင့်ဓာတုဗေဒအပေါ် သာ. ကြီးမြတ်အရေးပါမှုကိုနေရာချသောကြောင့်ဤမျှော်လင့်ချက်များဝိရောဓိနိမ့်သည့်ဖျောပွအပြုသဘောအိမ်ထောင်ရေးရလဒ်များအချို့ကြုံတွေ့ရဘို့အရွယ်ရောက် '' အခွင့်အလမ်းတွေကိုထွန်းသစ်စခွေငျးငှါအရာ, မျိုးစုံအိမ်မထောင်မီကျူးလွန်ခြင်းနှင့် Non-ကျူးလွန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ထွက်ရှာထွန်းသစ်စလူကြီးများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်
လက်ဝါးကပ်တိုင်-section ဒေတာနှင့်အတူသကဲ့သို့, ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များ၏ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအချိန် 1 အမြင်များများအတွက်ထိန်းချုပ်ရန်ပင်အခါ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အပေါငျးတို့သမှီခို variable တွေကိုအကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုးဖော်ပြခဲ့တယ်။ သို့သော်ယင်းအချိန် 1 အမြင်များမှညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနောက်ထပ်ထိန်းချုပ်မှုထည့်သွင်းပြီးနောက်မှသာသိသာထင်ရှားစွာအိမ်ထောင်ရေးကအဓိကဗဟိုနှင့်အလိုလိုလိင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ကြောင့်ယခင်သုတေသန (Braithwaite et al ။ , 2015) ကိုမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းနောက်တဖန်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာပိုပြီးအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်, မင့်တစ်ခု Associates ဆက်သွယ်မှုတခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်းစိတ်ကူး supporting, script ကိုသီအိုရီမှပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားထပ်ပြောသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပိုမိုခွင့်ပြုထားသောလိင်ကျင့်ဝတ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ (Willoughby et al ။ , 2015) အပါအ ၀ င်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (Braithwaite et al ။ , 2014) နှင့်ဆက်နွှယ်သောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောအိမ်ထောင်ရေးရလဒ်များအားနိမ့်ကျစေနိုင်သည် permissive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (Busby et al, 2010; ။ Busby, Willoughby, & ကာရိုး, 2013; Sassler et al, 2012 ။ )
အချိန်တဦးတည်းမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်တဲ့အခါမှာသိသိသာသာအိမ်ထောင်ရေး salience ပြောင်းလဲမှုများကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ပျက်ကွက်ပေမယ့်သိသိသာသာအိမ်ထောင်ရေးကအဓိကဗဟိုအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ကြကာစိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ထွန်းသစ်စလူကြီးစဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အရေးပါမှုတစ်ခုထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်ပြီးသူရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြင်ပြောင်းလဲပါဘူးစဉ်ကတဦးတည်းရဲ့အနာဂတ်အိမ်ထောင်ရေးအခန်းကဏ္ဍမှတာဝန်ပေးအပ်တစ်လျော့နည်းသွားဆွေမျိုးအရေးပါမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပုံ
အဖွဲ့အစည်း၏အလုံးစုံအရေးပါမှုအပေါ်သူတို့၏အမြင်များကိုလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဘဝ၏အခြားရှုထောင့်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်ပြီးသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူလက်ထပ်ခြင်း၏အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်အမြင်များအပေါ်ပိုမိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများသည်အိမ်ထောင်ရေးသည်အရေးကြီးသည်ဟူသောယုံကြည်ချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပုံရသည် သို့သော်သူတို့သည်အိမ်ထောင်ရေးကိုအခြားဘဝ ဦး စားပေးမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရေးမကြီးဟုထင်မြင်လာကြသည်။ ဤသည်ကအိမ်ထောင်ရေးဗဟိုနှင့်အိမ်ထောင်ကျခြင်းသည်ထွန်းသစ်စလူကြီး (Willoughby, Medaris, James, & Bartholomew, 2015) အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောတည်ဆောက်မှုနှစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုအကြံပြုထားသည့်ယခင်သုတေသနကိုအတည်ပြုသည်။
ကန့်သတ်နေသော်လည်းလေ့လာမှု, ထိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပြသထားတယ်အိမ်ထောင်ရေးယုံကြည်ချက်များနှင့်လိင်အလိုလိုသဘောထားတွေညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအိမ်ထောင်ရေးကအဓိကဗဟိုအပေါ်တစ်ဦး directional သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်အကြံပြုသည့်အချက်အလက်များ၏ longitudinal သဘောသဘာဝနှင့်အတူဆက်နွယ်နေလျက်ရှိသည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များအကြောင်းကြားစေခြင်းငှါမစဉ်းစား, အိမ်ထောင်များအတွက်ထွန်းသစ်စလူကြီးများပြင်ဆင်နေကြသူပညာတတ်များများအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အကြောင်းအရာလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်များ, အိမ်ထောင်ရေးမှာအထူးသဖြင့်လိင်အကြောင်းကြားဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းပိုမိုအသိအမြင်, သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးများအတွက်ထွန်းသစ်စလူကြီးများ '' မျှော်မှန်းချက်, အိမ်ထောင်အတွင်းအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆကျဆံရေးအရတော့သတင်းအချက်အလက်များကိုပညာတတ်များကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ယေဘုယျအားညစ်ညမ်းလူတွေကိုယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးများ (Schumm, 2015) ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းသို့ကူးသယ်ဆောင်ရသောပိုမိုယေဘုယျအားဖြင့်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားနေသောလမ်းအပေါ်တစ်ဦးသိမ်မွေ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။ အတူတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုသီအိုရီများနှင့်အိမ်ထောင်ရေး Paradigm သီအိုရီအိမ်ထောင်ရေးယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ relational script များအပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပိုပြီးပြည့်စုံနားလည်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့သီအိုရီနောက်ခံနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးသည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုရည်မှတ်အနာဂတ်သုတေသနနှင့်မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်များအကြောင်းကြားကူညီပေးနိုင်ပါသည်။